Nolosha Cusub :: Qoraal :: Aqoondirsad :: Ilaah Keliya Iyo Jid Keliya :: Dersiga Lixaad - Nebi Muuse
Qoraal > Aqoondirsad > Ilaah Keliya Iyo Jid Keliya > Dersiga Lixaad - Nebi Muuse
Nebi Muuse wuxuu ahaa mid ka mid ah hoggaamiyihii hore oo cajaa'ibka lahaa ee taariikhda soo mara. Wuxuu hoggaamiyey dad tiradooda ka badan tahay malyuun, oo wuxuu u hor kacay socdaal ku dhammaaday afartan sano. Maanta, hadduu nin dad sidaas u faro badan lamaddegaanka dhexdiisa mariyo, waxaa lagu xisaabi lahaa nacas weyn. Hase ahaatee, nebi Muuse wuu fuliyey hawshaas la mooday wax aan suurtaggal ahayn. Bal nebigaas madaxda ahaa oo weynaa, noloshiisii aynu faaqidno oo aan ka fekerno.
Nebi Muuse wuxuu ku dhashay dalka Masar. Waalidkiisna waxay ahaayeen addoomo reer banii-Israa'iil ah oo uu leeyahay Fircoonkii Masar. Boqorkaasu wuxuu amar ku soo saaray in addoomaha wiilashooda la wada dilo mar alla markii ay dhashaan. Muuse markii uu dhashay hooyadiis waxay ka baqday in laga dilo. Markaasay muddo saddex bilood ah aqalkeedii ku qarisay. Markii ay ugu dambayntii qarin kari waayday intaas ka badan, ayay abxad ama dambiil yar samaysay, oo intay daamur* korka ka marisay, ayay Muuse ku dhex ridday. Kolkaasay abxaddii webiga ku ridday oo raacisay biyaha. Kolkii cabbaar la joogay, ayaa gabadhii Fircoon waxay timid webiga, oo waxay aragtay abxaddii oo biyaha kor sabbeeynaysa. Markaasay soo qabatay oo abxaddii furtay oo waxay ka dhex heshay Muuse. Ina-Fircoon waxay diyaarisay naag u nuujisa naaska Muuse, waxayna ugu geeysay gurigeeda.
Haddaba nebi Muuse intii uu korayey wuxuu bartay tacliintii dalka Masar laga heli karay oo dhan. Wuxuuna noqday nin caqli badan. Nebi Muuse, in kastoo uu guriga Fircoon ku dhex koray oo uu joogay, haddana wuu ogaa inuusan isagu Masri ahayn. Maalin isagoo socda, ayuu arkay nin Masri ah oo addoon reer banii-Israa'iil ah garaacaya. Muuse taas aad buu uga carooday, maxaa yeelay, isaguba reer banii-Israa'iil buu ahaa. Markaasuu iska fiiriyey hareeraha oo goortii uu arkay inaan cidduna joogin, ayuu ninkii Masriga ahaa dilay. Haddaba Fircoon baa warkii maqlay, oo wuxuu damcay inuu Muuse dilo. Laakiinse nebi Muuse wuu baxsaday oo baaddiyaha ayuu u cararay. Halkaasuu ku noolaa muddo afartan sannadood ah.
Maalin Muuse wuxuu arkay, isagoo ari la jooga, geed ololayey. Dabkaasuna wuu ka duwanaa dabkii kale oo uu arki jiray oo dhan, maxaa yeelay, dabku aad buu u ololayaa, laakiinse geedka ma guban. Muuse wuxuu u soo leexday inuu qummaati u fiiriyo, laakiin wuxuu maqlay cod u yeeraya oo ku leh:
"Muusow, Muusow! Muuse wuxuu yiri, Waa i kan. Markaasuu wuxuu ku yiri, Halkan ha u soo dhowaan, kabahana iska siib, waayo, meesha aad taagan tahay waa dhul qoduus ah."
- Kitaabkii labaad ee Muuse oo la yiraahdo Baxniintii 3:5
Markaasaa Ilaah wuxuu Muuse u sheegay inuu maqlay qayladii addoomaha dalka Masar joogay, haatana uu rabo inuu iyaga samatabbixiyo. Ilaah wuxuu nebi Muuse ku yiri, "waxaan kuu dirayaa Fircoon, inaad dalka Masar ka soo kaxaysid dadkayga reer banii-Israa'iil ah". - Baxniintii 3:10 Markaas Muuse wuxuu Ilaah ku yiri, Bal yaan ahay anigu, markaan Fircoon u tegayo, oo aan reer banii-Israa'iil ka soo bixinayo dalka Masar?" - Baxniintii 3:11 Ilaahna wuxuu ugu jawaabay, "Xaqiiqa anigaa kula jiraya." - Baxniintii 3:12
Nebi Muuse wuu addeecay amarkii Ilaah oo wuxuu Fircoon weyddiiyey inuu addoomaha reer banii-Israa'iil faraha ka qaado oo iska sii daayo. Fircoon wuu ku qoslay nebi Muuse, oo wuxuu u sheegay in reer banii-Israa'iil aynan dalka Masar ka tegi karin innaba.
Markaas Ilaah wuxuu Masriyiintii ku saliday belaayooyin iyo masiibooyin, maxaa yeelay, Fircoon baa reer banii-Israa'iil sii dayn waayey. Biyihii dhulkoo dhammi waxay isku beddeleen dhiig. Waxay yimid malyuunaad rah, injir, duqsi, iyo ayax oo u ku aafeeyey dhulkii oo dhan. Lo'dii oo dhan waxaa ku dhacay xanuun. Dadkii oo dhan waxay ku dhacay boogo xunxun ama dhullax. Cirkii oo dhammi waa madoobaaday, roob dhagaxyaale ah samada ayaa ka soo da'ay. Ilaah waxaas oo dhan wuxuu ugu soo diray Fircoonkii Masar sababtoo ah wuxuu sii dayn waayey addoomadii inay tagaan.
Kolkaasaa nebi Muuse wuxuu mar kale u tegay Fircoon oo wuxuu ku yiri, Adigu Ilaah baad ku dhega'adkaatay, oo sidaa daraaddeed isagu hal aafo oo kale ayuu dadkaaga u soo dirayaa, oo habeenbadhka ayaa reer kasta inankooda curadka dhiman doonaa.
Markaasuu nebi Muuse wuxuu addoomihii u sheegay inay wan yar qalaan oo ay dhiiggiisa mariyaan albaabadooda labadiisa udub iyo fooddiisa, oo hadday saas yeelaan, way nabad galayaan. Haddaba kolkuu Rabbigu soo dhex maray dalka Masar, wuxuu doonayey curaddada Masriyiinta, laakiinse wuu iska kor maray aqal alla aqalkii dhiigga la mariyeyba. Kaddib aqaladii aan dhiigga la marin oo dhan waxaa habeenkaas ka dhintay ilmihii curadka u ah. Ilaah wuxuu reer banii-Israa'iil ku yiri, Markii aan dhiigga arko ayaan iska kiin dhaafayaa. Habeenkaas carruur faro badan baa dalkii Masar ku dhimatay, laakiinse reer banii-Israa'iil dhiiggii ay albaabadooda mariyeen awgiis ayay xukunkii dhimashada oo Ilaah kaga baxsadeen.
Qof kasta oo banii-aadan ah dhimasho ayuu ku xukuman yahay sidii Ilaah inoo sheegay. Haddaba adiguna sidaas oo kale ayaad dhimasho ku xukuman tahay.
"Mushahaarada dembiga waa dhimashada"
- Warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadkii Rooma 6:23
Waayo, waxaad tahay dembiile oo waa inaad dhimataa. Habase ahaatee, Ilaah wuxuu kuu sameeyey jid aad xukunkiisa kaga baxsan kartid. Sidii addoomihii oo kale waa inaad dhiig marsataa oo aad ku noolaataa si uu Ilaah ku dhaafo markuu arko calaamadda dhiigga ah. Sidee baad dhiigga u marsanaysaa? Dhiigga aad marsanaysaa waa noocee ama caynkee? Jawaabta dhaqsiyo ayaad u heli doontaa, ee sii baro buuggan.
1. Nebi Muuse
Boqol qof ayuu Masar u kaxeeyey.
Toban kun oo qof ayuu lamaddegaanka u kaxeeyey.
Dad aan fara yarayn ayuu dalka Masar ka hor kacay oo ka bixiyey.
2. Nebi Muuse wuxuu ku dhashay
3. Dembi mushahaaradiisu waa
4. Ilaah wuxuu yiri, Dadka waan dhaafayaa markii aan arko
5. Ilaah wuxuu Fircoon u soo diray
6. Shaygii nebi Muuse arkay, isagoo ololaya, muxuu ahaa?
7. Yaa diyaariyey dariiq ciqaabta dembiga laga baxsado?
8. Maxaa Ilaah inaga fogeeyey?
9. Nebi Muuse wuxuu dilay nin Masri ah.
10. Ilaah wuxuu aafo ku soo dejiyey addoomihii reer banii-Israa'iil. Run